Dhiittaan Mirga Dhala Namaa Mootummaa Itoophiyaatiin Gaggeeffamaa Jiru Qorannoo Walaba Sadarkaa Addunyaa (International Investigation) Barbaada (Ibsa ABO – Gurraandhala 1, 2020) – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhiittaan Mirga Dhala Namaa Mootummaa Itoophiyaatiin Gaggeeffamaa Jiru Qorannoo Walaba Sadarkaa Addunyaa (International Investigation) Barbaada (Ibsa ABO – Gurraandhala 1, 2020)
Dhiittaan Mirga Dhala Namaa Mootummaa Itoophiyaatiin Gaggeeffamaa Jiru Qorannoo Walaba Sadarkaa Addunyaa (International Investigation) Barbaada (Ibsa ABO – Gurraandhala 1, 2020)
Dhiha Oromiyaa (Godinoota Wallaggaa) irraa tajaajilli qunnamtii akka bilbilaa fi internet erga Mootummaadhaan kutamee baatii tokko tahee jira. Qunnamtiin cituu irraa kan ka’e waan guyya guyyaatti tahu ragaa guutuu wajjin yeroodhaan argachuun ulfaataa tahus ajjeechaa loltootni fi hidhattootni mootummaa Itoophiyaa lammiilee nagaa (meesh-maleeyyii/Civilians) irratti gaggeessaa jiraniin lubbuun namaa akka baala mukaa haca’aa jiraachuun dhagahamaa jira. Keessattuu Godinoota lama (Lixa Wallaggaa fi Qellem Wallaggaa) keessatti ajjeechaa fi miidhaa loltootni mootummaa Ummata irraan gahaa jiran jechi ittiin ibsan nu dhibee jira. Yakka waraanaa fi dhiittaa mirga dhala namaa jedhanii qofa ibsuun illee itti xiqqaata. Kibba Oromiyaa (Godinoota Gujii)ttis haalli jiru kana irraa hedduu addummaa hin qabu. Roorroo bifa kanaan waggaa tokko caalaaf bulchiinsa waraanaa (Command Post) jalatti Ummata kana irra gahaa jiru yeroo adda addaatti ibsinee furmaatni akka itti barbaadamu gaafachaa kan turre tahus hanga ammaatti rakkoon kunii fi sagaleen Ummata keenyaa dhageeytii isaaf malu argachuu hin dandeenye.
1. Ajjeechaan, hidhaa fi roorroon bifa hundaan Ummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiru kun hatattamaan akka dhaabbatuu fi loltootni Ummata nagaa fixaa jiran mooraa ofiitti akka deebifaman.
2. Rakkoon jiru karaa nagaa mariidhaan furmaata akka argatuuf mootummaan akka haala mijeessu.
3. Ummatni sababa kanaan miidhaan gara garaa irra gahee fi qe’ee ofii irraa baqachiifame qe’ee ofiitti deebi’ee nagaadhaan akka jiraatuu fi miidhama irra gahe irraa akka kabsatuuf birmannaa fi gargaarsi barbaachisu akka godhamuuf. Kan balleessaa fi murtii seeraa malee hidhaman akka hiikamanii fi barattoota dabaan barnoota irraa arihataman barnoota isaaniitti deebisuuf haalli akka mijeeffamu.
4. Yakka Ummata nagaa irratti raaw’atamaa jiruu fi miidhaa suukanneessaa gahaa jiru kana ilaalchisee qorannoon walabni kan sadarkaa Addunyaa (International Investigation) akka gaggeeffamu.
Oromoo har’a Waraana isa Bilisoomsuuf falmaa jiru; diina kuffisee kufaa jiru qeequ yommuun ilaalu waggaa 150 dura Minilik nu gobroomsee biyya keenya nurraa fudhachuun isaa itti xinnaatan jedha. Yeroo sana miti Oromoon ammayyuu , fuuldurattuu uummata Bilisummaa argu natti hin fakkaatu. Oromoon uummata salphinaa fi gabrummaa dhaqna (naturalized) godhate natti fakkaata. Oromoon miliyoona 50 ta’a jedhamu hanga Tigiroota miliyoona 5 kabaja hin qabu; hin sodaatamu. Oromoon uummata salphaattii diigamudha. Salphumatti walitti galagala. Uummanni kun ammayyuu jaarraa biraaf gabrummaa keessa jiraata natti fakkaata. Ijoollee ijoollee keenyaafan yaadda’e.
Godina Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa Ganda A/Gammoojjii jedhamutti galgala kana waraanni mootummaa Qeerroo Guyyaasaa Tasfaayee jedhamu qe’eetii waamtee rasaasaan rukuttee ajjeeftee jirti.
Qeerroo hedduu mana hidhaa aanichaatti guuraa jiru. Guyyaa har’aa reeffi RIB tokko bakkeedhaa arganii fudhataniiru. Kan kaleessaa sana haaloo bahachuuf ummata nagaa ajjeesaa waan jiraniif hawaasni hanga danda’ame of eeggannoo godhaa.
Biyyi sitti haa salphatu!!
#Walloo!! Obboleessi keenya Sayid Ammiyyee jiraataa aanaa arxummaa fursii kan ta’e sababa lafa oromoo walloo waladdeetti nafxanyaan maaf saamama jedhee morme qofaaf manni murtii godinichaa hidhaa waggaa 16n adabde.Dubbii onnee nama cabsuudha. Garuu, nuti hin cabnu, daran jabaannee qabsoo keenya finfiinsina!! Ka baduuf deemu, diinuma keenya!!
Isheen Eenyu? 13: ‘Qabsoo Oromoo dura ansullee mirga dubartootaafis nan falma’
Jilli ABO Jaal Dawud Ibsaatiin hogganamu German magaalaa Nuremberg galanii Jiru.